Gbasara anyị - Ningbo Dashuo agụmakwụkwọ Co., Ltd.
Ningbo Dashuo agụmakwụkwọ Co., Ltd.tọrọ ntọala na 2017, dị na Qiantong Town, Ninghai County, Ningbo City, ọwụwa anyanwụ China. Ọ bụ n'akụkụ ya ka Ningbo Beilun Port na Ningbo Lishe International Airport na-adaba adaba njem. Ọ bụ ụlọ ọrụ ọkachamara na ụlọ ọrụ na-eweta ụlọ ọrụ na-etinye nyocha na mmepe, mmepụta, ahịa na ọrụ. The ụlọ ọrụ na-tumadi aku na mmepe na mmepụta nke stapler, punching igwe, ntu lifter, akpaka pen ịcha igwe na ndị ọzọ na usoro nke ngwaahịa.
Kemgbe e guzobere ya na 2017, ụlọ ọrụ ahụ na-agbaso usoro ihe ọmụma na njikwa nke "nnwepụta nnwere onwe na ịchụso ịdị mma". Ruo ugbu a, ọ nwetala ihe karịrị ikikere iri atọ na ngalaba teknụzụ. Company si agbanwe agbanwe rube isi na "ahịa mbụ, aha mbụ, àgwà mbụ" ọrụ echiche, na-agbalịsi ike inye ndị kasị na-eri-irè ngwaahịa, ngwaahịa na-exported na United States, Japan, Europe, Middle East, South East Asia, karịa mba 60 na mpaghara, ihe karịrị ógbè 30 na obodo China nwere "HUACHI" ụdị sọọsọ ahịa netwọkụ, wee nweta mmata nke ahịa ụlọ na nke mba ọzọ.
The ụlọ ọrụ dị ẹdude osisi ebe 15000 square mita, ihe karịrị 300 ndị ọrụ, na elu mmepụta akụrụngwa na magburu onwe oru otu na r & D otu, ebe oruru nke ụlọ ọrụ, meriwo ọtụtụ ukpono. Anyị na-agba mbọ ịbụ ụlọ ọrụ kachasị mara ọrụ na ụlọ ọrụ na-eweta ụlọ akwụkwọ, wee bụrụ ọfịs ụlọ ọrụ ụwa na ụlọ akwụkwọ na-eweta ngwaahịa na ndị na-eweta ọrụ ika.